IKHALISA OTHISHANHLOKO "EYOKWEHLISWA"KWEMALI YOHLELO LOKUDLA EZIKOLENI - Ilanga News
Home Izindaba IKHALISA OTHISHANHLOKO “EYOKWEHLISWA”KWEMALI YOHLELO LOKUDLA EZIKOLENI
IKHALISA OTHISHANHLOKO “EYOKWEHLISWA”
BABALISA ngendlala ezobhekana nabafundi othishahloko kulandela ukwehliswa kwemali eyabelwe uhlelo lokudla ezikoleni. Omunye wothishanhloko oxoxe naleli phephandaba, uthi kubathusile lokhu ngoba kukhulunyelwa phansi, kuyinto efihliwe. Uthi okwenziwa umnyango kukhombisa ukungakhathaleli abafundi nokubhekelela izindleko zawo ngezisu zabaxakekile. “Inkinga enkulu lena, abanye abantwana ababaliwe ohlelweni lokudla, okusho ukuthi kufanele kwehliswe isikali ukuze bathole bonke abafundi. Sithuke kakhulu ngalesi sinqumo,” kusho uthishanhloko.
Omunye utshele leli phephandaba ukuthi bebejabulele ukunyuka kwesabelo mali emnyangweni kodwa bathuke kabi uma kuthiwa imali ayikho, kuzonqanyulwa ohlelweni lokudla. “Kunezikole ezingakaze ziyithole ngisho imali yezinsiza kusebenza yangonyaka odlule ebizwa ngo 30% other. Akekho ositshelayo ngayo njengoba sekuzoqalwa unyaka omusha wezimali,” kusho uthishanhloko. OKhulumela uMnyango wezeMfundo, KwaZulu-Natal uMnu Kwazi Mthethwa, uthi ayizange inyuke imali kwisabelo mali, bekubuyiswa eyayinqanyulwe yihhovisi likaNdunankulu, uMnu Sihle Zikalala ku-2020 ngenxa yokhuvethe.
“UMnyango wangena ezindlekweni owawungazihlelile kwalungiselelwa iCovid-19, kwabe sekuphazamiseka izinhlelo ezazivele zikhona zihamba kahle,” kusho uMnu Mthethwa. Okunye okukhalisa othishanhloko, wukungabalwa kwabafundi abavalelwa ngaphandle uma sebeshintshela ezikoleni ezintsha. UMnyango wezeMfundo KwaZulu- Natal, wabelwe u-R57.5 billion, okuyingxenye ewu-40% wesabelo mali yesifundazwe sonke esiwu-R140.4 billion ku-2021/2022. Phambilini uNgqongqoshe weze Mfundo KwaZulu-Natal, uMnu Kwazi Mshengu, watshela ILANGA ukuthi kulesi sabelo-mali, u-90% wathathwa imiholo yezisebenzi zomnyango. Wathi u-10% wengxenye esalayo yiwona wokwenza ezinye izidingo ezikoleni. Uthi imali ebinqanyulelwe umnyango u-R6.3 billion, kwase kubuyiswa leyo. mthobisis@ilanganews.co.za
Previous articleBashaywe ngamatshe ePhoyinti abeDudula
Next articleKunyamalale uthisha ‘eyogwazela umhloli’